IATA: nkwado nke EU COVID nke ọnwa 12 ga-echebe mgbake njem nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » IATA: nkwado nke EU COVID nke ọnwa 12 ga-echebe mgbake njem nlegharị anya
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kpọrọ oku maka ịkpachara anya na nzaghachi na European Commission nkwanye na EU Digital COVID Certificate (DCC) kwesịrị ịdịgide naanị ruo ọnwa itoolu ka ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi nke abụọ gachara, ọ gwụla ma a na-enye Jab booster jab.
“EU DCC bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịkwọ ụgbọ ala kọntinent a na-ahụkarị maka ijikwa nsogbu ahụike COVID-19 yana ịkwado nnwere onwe nke ndị mmadụ ịga njem ọzọ. Ọ na-akwado mgbake na-adịghị ike na mpaghara njem na njem nlegharị anya. Ma ọ dị oke egwu na mgbanwe ọ bụla na ya nwere usoro ejikọtara ọnụ nke na-amata mmetụta dị iche iche atumatu sitere na mba ndị otu n'otu n'otu ma na-akwalite nkwukọrịta n'ofe. EuropeRafael Schvartzman kwuru, obodo ntà's Regional Vice President maka Europe.
Ihe dị oke mkpa bụ nkwado ọgwụ mgbochi yana ihe achọrọ maka ịgba agba ume. Ka mgbochi mgbochi a na-enye site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-akawanye njọ, a na-enyekarị jabs booster iji gbatịa ma mee ka nzaghachi mgbochi ndị mmadụ sie ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na agbanyere agbam ume ka ọ nọgide na-adị mma nke DCC, ọ dị mkpa ka ndị steeti kwekọọ n'ụzọ ha na ogologo oge a na-enye n'etiti oge ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke na inyekwu dose ahụ. Ọnwa itoolu nke Kọmishọna tụrụ aro nwere ike ezughị oke. Ọ ga-aka mma igbu oge ihe a chọrọ ruo mgbe steeti niile na-enye ụmụ amaala niile nkwado jabs, yana maka ọnwa iri na abụọ iji nyekwuo oge maka ndị mmadụ iji nweta ọgwụ mgbochi, na-atụle usoro ịgba ọgwụ mgbochi mba dị iche iche a na-ewere.
"Atụmatụ maka ijikwa oke na nkwado nke DCC na-emepụta ọtụtụ nsogbu nwere ike ime. Ndị natara ọgwụ mgbochi tupu March, gụnyere ọtụtụ ndị ọrụ ahụike, ga-achọ inweta nkwado site na Jenụwarị 11 ma ọ bụ enweghị ike ịga njem. Will EU steeti kwekọrịtara na oge ahaziri ahazi? Kedu ka a ga-esi kwekọọ n'ihe a chọrọ n'ọtụtụ steeti mepere emepe COVID nke EU nabatara nke ọma? Ọzọkwa, na Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) ekwuola na ekwesịrị ka ebute ụzọ maka ndị na-adịghị ike bụ ndị na-enwetabeghị ọgwụ mbụ, ma ọbụghị naanị ihe nkwalite. Gburugburu ụwa, mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka nwere ogologo ụzọ iji gaa n'ọtụtụ steeti ndị na-emepe emepe ma a ga-elekwasị anya n'ịhụ na nha nha nha nke ọgwụ mgbochi. Nyere na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị njem ụgbọ elu anọghị n'otu ndị kachasị emerụ ahụ, ikwe ka oge ọnwa iri na abụọ tupu ihe nkwalite ga-abụ ụzọ dị mma maka ndị njem na ụzọ dị mma maka ịgbazinye ọgwụ mgbochi, "Schvartzman kwuru.
Nkwekọrịta ọgwụ mgbochi
Ihe ọzọ na-echegbu onwe ya bụ ndụmọdụ Kọmịshọn ka ndị njem were ndị na-adịghịEU Ọgwụ mgbochi akwadoro kwesịrị igosi ule PCR tupu ọpụpụ na-adịghị mma. Nke a ga-akụda njem site n'ọtụtụ akụkụ ụwa ebe ọnụ ọgụgụ ọrịa dị ntakịrị, mana ndị bi na ya agbawo ọgwụ mgbochi. WHO- ọgwụ mgbochi akwadoro nke na-enwetabeghị nkwado iwu na EU.
"Gọọmentị kwesịrị ibute amụma ndị dị mfe, nke a na-ahụ anya na nke bara uru iji hụ na ndị njem nwetaghachiri obi ike na njem na ntụkwasị obi nke ụgbọ elu iji mepee ụzọ. Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa Ọrịa nke Europe kwuru hoo haa na akụkọ ihe egwu ọhụrụ ya na mmachi njem agaghị enwe mmetụta ọ bụla na oge ma ọ bụ ike nke ọrịa na-efe efe mpaghara. Anyị nwere ekele na ndị ọchịchị kwesịrị ịmụrụ anya, mana ịkpa ókè n'etiti ọgwụ mgbochi ndị WHO kwadoro bụ imebi ihe onwunwe na ihe mgbochi na-enweghị isi na nnwere onwe ndị mmadụ ime njem, "Schvartzman kwuru.